amathiphu Ukuqomisana. Dress for impumelelo.
Igcine ukubuyekezwa: Septhemba. 11 2019 | 3 imiz ufunde
Akwenzeki uthole ithuba lesibili lokwenza isithombe esihle kothile. Kuyiqiniso ukuthi abantu abaningi osheshayo, ngokuvamile enganakile, izahlulelo ngobuntu bomuntu ngesisekelo imizuzwana embalwa yokuqala emhlanganweni wabo wokuqala. Ngenxa yalokhu qiniso, it kubaluleke kakhulu ukubheka futhi agqoke okusemandleni akho uma behlangana for a date lokuqala. Attire lokufanelekile, ukucija omuhle, nesitayela imfashini ngempela isibonakaliso umuntu ngosuku lokuqala, futhi kungaba isici ukwakheka noma-break mayelana nendlela babeyothola abazizwa ngayo usuku lwesibili. Nazi ezinye izeluleko ezingakusiza ubukeke lapho uzama ukuphoqa.
Funda Bheka Best Yakho
Uma ungenayo i umuzwa inert of style, ungase kudingeke wenze kancane ucwaningo ukuze uthole ukuthi yini ibukeka best uvumelane umzimba wakho uhlobo, ibala, nobuntu. Indlela enhle ukuthola ukuthi yini imibala bheka best on kuwe ukuba aye a analysis umbala kwenziwe. Vakashela a spa elihle noma salon ukuthi ongenza a analysis umbala kuwe futhi ukuthola imibala ukusebenza kangcono kokuqedwa yethu. Esekelwe analysis, kuyotsenga ezinye izingubo ukusebenza ngaphakathi ehambisanayo umbala wakho.
Enye indlela yokuthola ukuthi yini izingubo, ukulungisa, futhi izinqumo fashion ubukeke kuwe ukugcina ithrekhi of lokho abangane bakho, umndeni, futhi osebenza abakushoyo ngawe. Uma umngane wakho umhlabeleli egcina ekhuluma kanjani okuhle obukeka uma ukugqoka othize, bhala lokho futhi bagqoke ukuthi umbala ngosuku lwakho. Uma osebenza yamakhono haircut yakho entsha noma ngubo, kungcono uphawu oluhle ukuthi haircut noma ngubo kuba ezithophayo kuwe futhi kungaba kuhle usuku lokuqala.
Ungakwazi futhi uthathe umngane ukuthi ocabanga ukuthi stylish out ethenga nawe for usuku lwakho ngubo. Kungase futhi kube umqondo omuhle ukufunda ngokusebenzisa omagazini fashion abanye ukugcina up-to-date kokwenzeka and ukuthenga izingubo dating isuselwe. Qiniseka ukuthi ugqoka ngubo entsha obala phambi uya ngosuku ukubona luhlobo luni reaction uthola ontanga yakho. Musa izame into brand new ngosuku lwakho lokuqala.
Yiba ziyakhohlisa – Okuncane okuningi
Musa ukweqisa lapho ukuzilungisa for usuku lwakho. Sonke sifuna ukubheka okusemandleni ethu, kodwa izinzwa kungase kukwenze ukuya kancane kude kakhulu yakho ukwakheka, izingubo, noma Iphunga. Khumbula, ezicashile ukwakheka egcizelela izici yakho best zobuso zingaba nethonya kangcono kunokuba ukubufihla amaphutha akho nge esindayo akha futhi lipstick bright noma othi awube.
Kubalulekile ukuya lula phezu izesekeli izingubo nezinto zokuhloba. Namacici Nice, iwashi handsome, noma umgexo azwakale kamtoti kungasiza ukugcizelela ubuhle bomuntu kanye nesitayela, kodwa esindayo zegolide ngamaketanga, emasongweni zonke ngomunwe, futhi empeleni namasongo kwezinto ezinhle ezingaphazamisa usuku ngokuqaphela ubuhle bakho abakuzalayo.
Uma egqoke cologne noma perfume, musa engamamilimitha wena in Iphunga yakho! Ukuze ugweme kokuwaphoqa nge Iphunga yakho, Karbaspray Cologne noma amakha phambi kwakho ngaphambi ngokugqoka bese engena isifutho. Lokhu uyonika mfana ezicashile Iphunga ngaphandle iphunga namandla.
Dating Fashion Dos okufanele nokungafanele Khumbula Always
Nanka amathiphu ambalwa fashion kufanele njalo bathobele lapho uya ngosuku:
1. Ezihlanzekile, izandla kamnandi manicured, uzilungise izinwele ebusweni, futhi a haircut ehlanzekile.
2. Gqoka izingubo uvumelane futhi akhohlisa wena, ukugwema noma yini too baggy (kwakungase ubukeke fat noma frumpy) futhi badede yini tight kakhulu noma imingcele.
3. Ukugqoka ngokufanelekayo for the isikhathi, ukuhlala kude tank eziqongweni nazimbadada (ngisho noma isitayela sakho evamile) uma futhi usuku lwakho nokuya a party dinner
Futhi nazi izinto okufanele bayigweme lapho ukugqoka ukujabulisa ngosuku lokuqala:
1. Musa ukugqoka brand izicathulo ezintsha noma okokugqoka uzizwa ungakhululekile in izicathulo ezintsha ezingadala ngempela ubuhlungu izinyawo zakho uma kungukuthi abaphukile kahle futhi, uma njalo ekulinganiseni tie yakho noma collar ngoba uzizwa ungakhululekile in a suit, uyophenduka off usuku lwakho.
2. Gwema ezisindayo ukwakheka kanye izingubo embi, bathatha away from ungubani ngempela nobuhle bakho abakuzalayo.
3. Ungazami kakhulu nemfashini; ungase ngeke akwazi ukudonsa it off. Uma ufuna ukuba izame look yakho, sikwenze ngaphambi kosuku bese uthole impendulo yini noma cha look isebenza wena.